Ezemfundo | Zwelitsha Online
Ukukhuthalela imfundo yenye yezinto ebezingundoqo eZwelitsha. IThembalabantu, isikolo sokuqala samabanga aphezulu, yabiza abafundisi ntsapho nabafundi bangaphandle. Kwintsuku ezidlulilleyo, abazali abasuka kude kwiinnjengendawo ezifana neUpington, iKapa, iGoli nakwidolophu zaseFreyistata babethumela abantwana babo eThembalabantu.
Ngezo mini, yayinehostele yayo into eyayinza ibe yindawo yokudibana yabafundi abasuka kumakhaya ahlukeneyo. Ukuwongwa komseki nqununu, uMnumzana uMagodla mhlawumbi bekumele kudala kwenziwa.
IThembalabantu yeza nokusekwa kwesinye isikolo semfundo samambanga aphezulu kwaNompendulo, inqununu inguMnumzana Mti.
Ukusekwa kwesi sikolo kwavula amathuba ongezekileyo kootishala kwabakho neendawo ukuze kungene abafundi abatsha. Ezi zikolo zingovulindlela, zalandelwa nguNonceba ekugqibeleni iHector Peterson. Endenza umdla ,yeyokuba le Hector Peterson yanamhlanje yayiyiZwelitsha Teacher Training School eyayityebisa ezentlalo ikakhulu ezemidlalo.
Kwakukho nesikolo iZwelethemba Vocational School nayo eyazisa abantu abaninzi kule lokishi yethu.
Xa kukonke, ubukho bezizikolo kwatyebisa iintlobo ngeentlobo zabantu nenkcubeko yelokishi yethu.
Ndithi ngobugagu ukuchithakala kwamanye kwalamaziko ngendlela esasiwazi engayo kwaba negalelo ekupheleni kwenkqubela phambili yoluntu.
Noluphi na uluntu ludinga ukungena ngoxinzelelo kwefuthe lwabasuka ngaphandle. Xa sicinga ekuhambeni kwexesha , ukuba sinqwenelela ukubuyisela iZwelitsha kwindumasi yayo, masicinge ngale miba mincinane nemikhulu.
Umntu ngethande ukusebenzisa eli cwecwe akhahlele bonke abafundisi ntsapho bexesha lethu, kodwa kukho ingozi yokukhubekisa abo bangakhankanywanga. Ndikhahlela indima eyadlalwa ngabo bonke abafundisi ntsapho ekwakheni iZwelitsha kunye nabo bazizifundiswa kwezi ntsuku, bangalibali ukuba banetyala lombulelo kubasunguli bemfundo yaseZwelitsha.
Ndingahlala ndibhala ngobuhle bobomi esasibuphila eZwelitsha, kodwa xa kuthethwa inyani ngoku iZwelitsha isisithunzi sento eyayiyo. Inyani kukuba iingxaki ezikhokele ukuba ilokishi yethu yebhongo ibe kule ndawo ikuyo, kwaqala kwiminyaka yoo1980, ufuduko lwabahlali lwaqala emva kokuba abaqeshi baflathela iZwelitsha , okanye ukuqhekeka komanyano loluntu olwalusisiphumo kokufumana inkululeko kweCiskei okanye ukuvalwa kwamanye amaziko emfundo.
Umceli mngeni esijongwe sisizukulwana sale mihla esisenebhongo ngokunxulunyaniswa neZwelitsha kukuba bazibuze umbuzo omkhulu ojonge bonke abathunywa benguqu, “KUFUNEKA KWENZIWE NTONI?” Kuwo onke amaxesha, ehlabathini lonke, lo ngumbuzo ozisa amandla emveli nobogorha bengqondo
Nov 29, 2013 in Ezamandulo, Ezemfundo, Ezoluntu